मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको क्षेत्र हो, गोरखा २ ।
पूर्व सहयोद्धा तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भइरहेको प्रतिष्पर्धाले उक्त क्षेत्र चर्चामा आएको हो ।
एउटै क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ र नयाँ शक्तिका भट्टराईले उमेदवारी दिएपछि चर्चामा रहेको गोरखा २ का मतदाताले कसलाई चयन गर्लान् त ? दुवै प्रभावशाली नेता किन एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् त ? आगामी निर्वाचन, तयारी, गोरखामा माओवादी केन्द्रको अवस्था लगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
निर्वाचनको तयारीमा हुनुुहन्छ, अहिलेसम्म तयारी कस्तो भएको छ ?
गोरखामा मनोनयन दर्ता गरेर काठमाडौं आइपुगेको छु । अब निर्वाचन घोषणा पत्र र मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यविभाजन सकेर फेरि जिल्लामै फर्किन्छु ।
एक अर्कालाई गालिगलौज गरेर नथाक्ने माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन बनेको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
प्रतिस्पर्धामा जाँदा एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने बानी देखिएको छ । त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाँही मेरो व्यक्तिगत विचार पहिलेदेखि नै रहन्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । सन्तुलित निरन्तरताको विचारले मात्र काम गर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । कहिलेकाँही पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा जाँदा अलि बढि एक अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृतिहरुले गर्दा यो एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने खालको प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । यो स्वभाविक पनि हो ।
तर, देश र जनताको आवश्यकता, नेपाली जनताको आवश्यकता, नेपाली कम्युनिष्टहरुको आवश्यकतालाई गहिराईमा र आत्मसात गरेर मात्र यो निर्णय भएको कारणले यो वाम गठबन्धन अन्तर्गत चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको दिशा, दुईवटैलाई सफल पार्न हाम्रो पार्टी र नेकपा एमाले दृढ छ ।
तपाईंहरु गठबन्धनमा जोडिएपछि एक अर्काको विरोध गर्न छाडेको हो ?
हो, हाम्रो गठबन्धनको आचारसंहिताले पनि दिँदैन र अहिलेको आवश्कता पनि त्यो होइन ।
वाम गठबन्धनमा जोडिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
वाम गठबन्धन बनेपछि हाम्रो र एमालेका कार्यकर्ता अत्यन्तै खुशी छन् । उनीहरुले, ‘जे हुनु थियो त्यो भयो, नेताहरुले अत्यन्तै साहसिक काम गरे । यसलाई जसरी पन सफल पार्नपर्छ भनेका छन् ।’
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि तपाईं र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट उमेदवारी दिनुभएको छ । यससँगै तपाईं र बाबुरामलाई तुलना गरेर पनि हेरिएको छ । तपाईंलाई गोरखाका जनताले मत किन दिने ?
मेरो आफ्नो विचार, राजनीति, देश र जनताप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठा नै मुख्य कुरा हो । यसले नै मुख्य भूमिका खेल्छ । मान्छेहरुलाई जनताले यसको निष्ठा कस्तो छ ? यसको कुनै आदर्श मूल्यमान्यता छ कि छैन ? जनताप्रति कत्तिको बफादार छ ? व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ कि राख्दैन ? मूल्यमान्यता, आदर्शलाई केन्द्रमा राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा जनताहरुले हेरिराखेका हुन्छन् । त्यो कोणबाट नै मलाई जनताले अपार माया र विश्वास गर्छन् । त्यो नै मेरो चुनाव जित्ने मुख्य आधार हो ।
गोरखाली जनता नै तपाईंलाई मत दिने कि बाबुरामलाई भन्ने कुरामा दोधारमा छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?
गोरखाली जनता दोधारमा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । गोरखाका सचेत, परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रवादी जनताले मलाई नै मत दिएर विजयी गराउनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु । बाबुरामलाई पनि मत दिँदैनन् भन्न चाँही मिल्दैन तर, पनि आम मानसिकता चाँही मेरो पक्षमा नै छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन खालको अस्थिरता, भ्रष्टिकरण र मूल्यमान्यताविहीनता हाबी भइरहेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि र गोरखालाई एएटा नमुना बनाउने पनि मेरो लक्ष्य छ ।
तपाईंको खास चुनौती बाबुराम भट्टराई मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ?
बाबुरामजीसँग चुनाव लड्न मैले कुनै चुनौती नै देखेको छैन । बाबुरामजी एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले चर्चा हुनु त स्वाभाविक हो । तर, उहाँले जसरी माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, माओवादी छोड्नुभयो, कम्युनिष्ट आन्दोलन छाड्नुभयो, नयाँ शक्ति बनाउँछु भनेर जानुभयो, नयाँ शक्ति बनाउने प्रक्रिया नै कमजोर भइसकेपछि वाम एकताको पहल गर्नुभयो, त्यो एकतापछि सफल भएन ।
त्यसपछि मशाल चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव उहाँहरु चुनावमा जानुभयो, त्यसपछि नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीबीच चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकता गर्ने भनेपछि उहाँ वाम गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो । त्यसपछि फेरि आदर्श मूल्यमान्यता सबै छोडेर गठबन्धनबाट बाहिरिएर काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न जानुभयो । यो प्रकारको कामले गर्दा उहाँलाई सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, आदर्शविहीनता र अविश्वासी बनाएको छ ।
तपाईंहरुले नयाँ शक्तिसँग पनि चुनावी तालमेल थाल्नुभएको थियो, त्यस्तो बेलामा बाबुराम भट्टराई र तपाईं किन एउटै क्षेत्रबाटै उठ्नुभएको ?
वाम गठबन्धनमा सामेल भइसकेपछि लिडरसिपसँग बसेर उहाँहरुले ठीक ढंगले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको भए हुन्थ्यो । त्यसो गर्नुभएन । पुरै अतिरञ्जित तरिकाले उहाँहरुले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्को कुरा उहाँले हामीबीचमा छलफल हुँदाहुँदै ‘आकाश खसे पनि पातल भासिए पनि म गोरखा २ बाट नै चुनाव लड्छु भन्नुभयो’ यो गठबन्धनभन्दा बाहिरको कुरा भयो । उहाँले वामपन्थी गठबन्धनमा यही मात्र भन्नुपर्ने थिएन । समग्रमा उहाँहरुले जुन १५ सिटको दाबी गर्नुभयो त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने स्थितिमा गठबन्धन थिएन ।
तपाईंहरुको वाम गठबन्धनलाई जनताले किन मत दिने ? गठबन्धनको आधार के ?
पहिलो कुरा नेपालमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरु नै पछिल्लो पटक नेतृत्व गरेर अहिलेको परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेका हुन् । दोस्रो कुरा नेपालमा कम्युनिष्ट जनमतको बाहुल्यता थियो र सबैको चाहना कम्युनिष्ट शक्तिहरु एक होउन् भन्ने पनि थियो त्यो पूरा भएको छ । अब यो गठबन्धनले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुको साझा बहुमतले सरकार बन्छ । यसले नै संविधान कार्यान्वयन गर्छ भन्ने जनताले पनि बुझेका छन् र मतदान गर्छन् ।
नयाँ शक्ति गठबन्धन जोडिएको केही हप्ता नबित्दै बाहिरियो । गठबन्धन बनाउन तपाईँ सक्रिय रुपमा लाग्नुभएको थियो, एमाले र माओवादीबीच पनि पार्टी एकता हुँदैन चुनावी तालमेल मात्रै हो भन्छन् नि ?
एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता सुनिश्चित छ, हामीले चुनाव छिट्टै आइसकेकाले पार्टी एकताको निम्ति सबै गृहकार्य नभ्याएको भएर अहिले पार्टी एकताको घोषणा मात्रै गरेका हौं । तर, चुनाव सकिएपछि यो गठबन्धनले थप एउटा आधार तयार गर्छ ।
त्यसकारणले पार्टी एकतामा अगाडी बढ्छौं त्यसमा कसैले शंका गर्नुपर्दैन । बाबुरामजी कम्युनिष्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनबाट बाहिर गइसक्नु भएको हो, उहाँले यो बीचमा आफ्नो भौतिक अस्तित्वको संकटले गर्दा ‘मेरो पहिलाको विरासत वामपन्थी नै हो’ भनेर फेरी वामपन्थी कित्तामै आउनुभयो । फेरि उहाँले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुभयो, आफ्नो नीति, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा पनि बाहिर जानुभयो । बाबुरामजीको प्रवृति हेर्दा पार्टी एकता नै हुन्छ भनेर भर पर्न अवस्था भने थिएन ।
वाम गठबन्धनको चुनावी तालमेल कस्तो भइरहेको छ ?
गठबन्धनको चुनावी तालमेल निकै उत्साहजनक छ । जनताहरु निकै उत्साहित छन् । हामीले ३२ वटा जिल्लामा जसरी चुनावी तालमेल गर्यौं । असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एक अर्काप्रति उदारतापूर्वक अगाडी बढिरहेका छौं । अब एक दुई दिनभित्र नै हामी दोस्रो चरणको निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट पनि सक्छौं र उमेदवारी पनि तय गर्छौं ।